Wararka - Cunto xayawaanno cusub oo la qaboojiyey
Cunto xayawaanno cusub oo la qaboojiyey
1. Maaddooyinka cayriin ee qaybo ka mid ah miisaan ahaan: 100 qaybood oo xoolaha iyo hilibka digaaga ah, 2 qaybood oo biyo ah, 12 qaybood oo glucose ah, 8 qaybood oo glycerin ah, iyo 0.8 oo ah cusbada miiska.Waxaa ka mid ah, hilibka xoolaha waa digaag.
2. Habka wax soo saarka:
(1) Diyaarinta: Horay u daawayn xoolaha iyo hilibka digaaga si aad u hesho dhawr xabbo oo xoolo ah iyo hilib digaag;u diyaari hilibka xoolaha iyo digaaga, biyaha, gulukooska, glycerol iyo milix iyadoo loo eegayo saamiga caanaha;
(2) Baraf-jaridda: dooro xoolo iyo hilib digaag aad u dhammaystiran oo dhig meel 10 ° C ah si ay si dabiici ah u dhalaaliso 12 saacadood;
(3) jarjar: ka saar seedaha, maqaarka iyo baruurta hilibka iyo digaaga oo dhami dhalaalay, oo jarjar si aad u hesho xoolo qaabaysan iyo hilib digaag;qaabka xoolaha iyo hilibka digaaga waa xariijimo, laba jibaaran, dheeman, saddex xagal ama qaabab kale
(4) Nadiifinta: Ku rid xoolaha la jarjaray iyo hilibka digaaga biyo nadiif ah oo mar labaad dhaq, ku qooy biyo socda 20 daqiiqo;
(5) Biyo-mareen: Ku rid xoolaha la dhaqday iyo hilibka digaaga saxaaradda bullaacadaha si aad u daadiso biyaha, oo daadi 60 daqiiqo at 5 ℃;
(6) Tumble: Ku rid qadarka caanaha ee xoolaha iyo hilibka digaaga, ka dibna ku dar qiyaasta caanaha ee biyaha, glucose, glycerin iyo milix;shid tumbler si aad u hesho hilibka ugu horreeya ee xoolaha iyo hilibka digaaga;xakamaynta Halbeegtu waa sida soo socota: Ka dib markii cajiinka tumble loo daadgureeyay -0.06Mpa, xawaare 60r / min ah, wuxuu horay u wareegayaa 10 daqiiqo wuxuuna u rogi doonaa 10 daqiiqo;
(7) Joogsiga: Ku rid hilibka ugu horreeya ee isku dhafka ah ee xoolaha iyo hilibka digaaga ku rid weel oo u daa inuu istaago -8 ° C 4 saacadood si aad u hesho hilibka labaad ee xoolaha iyo hilibka digaaga;
(8) Dhig saxanka iyo dubay: Ku rid hilibka labaad ee xoolaha iyo hilibka digaaga oo isku dar ah saxarada saafiga ah, ka dibna ku rid qolka qalajinta si aad u qalajiso.Heerkulka qalajinta waa 45 ° C, wakhtiga qalajintana waa 6 saacadood.Hilibka hilibka doofaarka ee saddexaad oo wanaagsan;
(9) Qaboojin: qaboojinta hilibka saddexaad ee xoolaha iyo hilibka digaaga ee isku dhafka ah ee heerkul caadi ah iyo jawi qalalan si loo helo hilibka afraad ee xoolaha iyo hilibka digaaga;heerkulka qaboojintu waa 30 ° C, qoyaanka hawadu waa 40%, wakhtiga qaboojintuna waa 6 saacadood;
(10) Qabow degdeg ah: Ku rid hilibka afraad ee isku dhafka ah ee xoolaha iyo digaagga bakhaar si degdeg ah u qaboojinaya si aad u hesho hilibka shanaad ee xoolaha iyo hilibka digaagga;heerkulka qaboojinta -40 ° C, wakhtiga qaboojinta 8 saacadood;
(11) Qalajinta qaboojinta: Dhig hilibka shanaad ee xoolaha iyo hilibka digaaga isku darka ah weelka qaboojinta qalajinta si aad u hesho cunto xayawaan ah oo qallalan.Waqtiga lyophilization waa 20 saacadood, iyo heerkulka liophilization waa -50 ° C.
(12) Ogaanshaha birta: Ku rid cuntada xayawaanka ee la qaboojiyey ee la helay saxanka saafiga ah, oo ka soo qaado alaabta ay ku jiraan qaybaha birta iyada oo loo marayo qalabka wax sheega birta;cabbirrada ogaanshaha biraha Fe: 2mm, SuS: 1mm;
(13) Baakadaha: U isticmaal mashiinka faakuumka baakadaha faakuumka, heerka vacuum -0.04MPa.
(2) Qabow degdeg ah.Muunada ku rid qaboojiye degdeg ah oo qabooji ilaa -18 ° C.
(3) Dubidda.Ka saar walxaha, ku rid saxanka dubista, oo u dir foornada.(Dab kor iyo hoos, ku dub 150 ℃ 5min, ka dibna u leexo 130 ℃ 10min).Ku caday malabka diyaarsan oo biyo ah hilibka la ilaaliyo oo u dir foornada mar labaad (kor iyo hoos dabka, 130 ℃, 5min).Soo saar, ku dabool lakabka warqad dufan leh, ku wareeji saxanka dubista, ku caday biyaha malabka, ugu dambeyntiina u dir foornada (kor iyo hoosba dabka, 130 ℃, 20min ayaa ka bixi kara foornada).Iska yaree hilibka duban oo u dhig qaab leydi ah.
Waqtiga boostada: Agoosto-22-2020
Khadka waxsoosaarka qashinka barafaysan Khadka Soo saarista Baasto Cusub Khadka Wax soo saarka Raashinka Raashinka Raashinka ah Pizza Cajiinka Mixer Machine Khadka Waxsoosaarka Cuntada Eeyga Khadka Waxsoosaarka Raashinka Xoolaha